Olona handeha hivalan-drano teo amin'ny WC Public Esplanade tokony ho tamin’ny 10 ora alina no lasibatra. Olona dimy ireto farany no niaraka ka vehivavy ny iray. Rehefa niantso vonjy anefa ity farany dia nitsoaka ireo mpanendaka saingy nifanehitra tamin’ny polisy sendra nanao fisafoana. Mbola vao 16 taona izy roalahy kely ireto. Raha ny fantatra dia efa mpamerin-keloka izy roalahy satria vao avy nivoaka ny fonja. Omaly izy ireo no natolotra ny fampanoavana ka nampidirina am-ponja vonjimaika indray.